आज शनिबार ! थाहानगरका यि ठाउँमा बत्ती आउँदैन, के हो कारण ?
थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा १ कार्तिकमा दिनभर विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पालुङ वितरण केन्द्रले सूचना प्रकाशन गर्दै बुस कटिङ तथा लाईन पेट्रोलिङ साथै टौखेल, बज्रबाराही तथा ओखरबजार क्षेत्रको ब्रान्च आईसोलेटर समेत मर्मतको लागि भन्दै विद्युत सेवामा अवरोध हुने जनाएको छ । विहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने सूचनामा जनाइएको छ ।
लाइन मर्मत भन्दै पालुङ वितरण केन्द्रले करिब एक महिनापछि पुनः शनिबार विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध गरी मर्मत गर्न लागेकाे हाे ।